Xarakada Al-Shabaab oo xukun diil toogasho ah ku fulisay Nin dilay Wiil dhalinyaro ah – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaXarakada Al-Shabaab oo xukun diil toogasho ah ku fulisay Nin dilay Wiil dhalinyaro ah
Hiiraan Xog, Oct 12, 2017:- Xarakada Al-shabaab ayaa saakay xukun diil toogasho ah ku fulisay Nin ku diilay degaan hoosyimada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Xarkada Alshabaab ayaa ninkan ka soo qabatay degaanka lagu magacaabo Baardheere ee hostaga degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Ninkaan la toogtay ayaa la sheegay in goob Aroos lagu qabay uu ku dilay wiil dhalinyaro ah oo aay halkaas isku gacan qaaden, waxaana halkaas ku dhintay wiilkii dhalinyarada ahaa ee ay isku gacan qaaden.
Alshabaab ayaa waxaay ay gacanta ku dhigeen Ninka gacan ku dhiiglaha ahaa ee dilay wiilka dhalinyarada ah, waxaana la geeyay magaalada Buq-Aqablle ee gobolka Hiiraan.
Maxakamada Alshabaab ayaa ku xukuntay diil toogasho ah ku riday Nin horay u dilay wiil dhalinyaro ah.
Ninkaan ayaa saakay waxaa magaalada Buq-Aqablle ee gobolka Hiiraan, xukun toogasha ah ku fuliyay Aabaha dhalay wiilka dhalinyarada ah ee horay loo diilay, waxaana la sheegay in xukunka toogashada ah uu ka dhacay meelfagaaro ah oo aay isugu imaaden kumanaan shacab ah.